Diyaar ay Israa’iil leedahay oo lagu soo riday gantaal Suuriya laga soo ganay | Raadgoob
Diyaar ay Israa’iil leedahay oo lagu soo riday gantaal Suuriya laga soo ganay
Diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa’iil ayaa burburtay xilli la ganay gantaal nooca lidka diyaaradaha ee ay Suuriya leedahay kaddib markii diyaaraddu ay fulisay weerrar ka dhan ah bartilmaameedyo Iiraan ay ku leedahay gudaha waddanka Suuriya, waxaa sidaas sheegay milateriga Israa’iil.
Labadii duuliye ee diyaaradda wadday ayaa iyagoo badqaba baarashuut kaga booday diyaaradda kaddib markii ay ku burburtay waqooyiga Israa’iil. Isbitaalka ayaana markii dambe la dhigay.
Israa’iil ayaa sheegtay in diyaaradeeda dagaalka ee F-16 ay waday weerraro ay kaga jawaabaysay diyaaradaha aanay cidina wadin ee ay Iiraan leedahay oo gudaha u soo galay Israa’iil. Diyaaradahaasi aanay cidina wadinna markii dambe waa la horjoogsaday.
Waxa uu bayaanku intaasi ku daray in diyaaraddaasi durbadiiba la ogaaday “aadna loola socday ilaa laga hor istaagayba.”